zimbabwe News — Latest On Zimbabwe — — The Guardian Nigeria News – Nigeria and World News
Zimbabwean doctors have filed a lawsuit aimed at compelling the government to beef up coronavirus protection for public hospitals and healthcare workers.
Buckets and jerrycans in hand or in wheelbarrows, dozens of Zimbabweans stand close to each other in a long queue, patiently waiting at a borehole in Harare's middle-class Mabelreign suburb to collect water.
Zimbabweans braced Sunday for a three-week lock-down to curb the spread of the coronavirus which has killed one person so far and infected six others, and for many
South Africa forties border fence with Zimbabwe over coronavirus
South Africa said Thursday it would erect or repair 40 kilometres (25 miles) of fence along its border with Zimbabwe to secure porous entry points in a bid to curb the spread of coronavirus.
Virus 'god's punishment' of west: Zimbabwe minister
Zimbabwe's defence minister has called the coronavirus pandemic a "punishment" of the US and Europe for imposing sanctions against members of the ruling regime over human rights abuses.
There are strong indications already that the new visa policy recently rolled out by President Muhammadu Buhari has manifested more underlining interests than the promoters
Countries harp on science-based action for hazardous wastes elimination
Faced with the dangers of hazardous chemicals, representatives of about 11 African countries have canvassed for improve capacity and interface between science
The floor is dusty, the walls filthy and the furniture decrepit, but for two weeks last month, a tiny flat in a Harare township was transformed into a maternity clinic where scores of babies were born.
Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga, who led the ousting of Robert Mugabe, returned home Saturday, four months after he was airlifted to China for medical care, state media reported.